China Metal zọ Manufacturer na Supplier | Meste
Metal zọ bụ iji ntụmadị na-anwụ na deform ma ọ bụ mgbaji ọkpụkpụ igwe anaghị agba nchara, ígwè, aluminom, ọla kọpa na ndị ọzọ efere na mba ọzọ ihe iji nweta a ụfọdụ udi na size nke a usoro.
The zọ usoro nwere ike kere n'ime nkewa usoro na-akpụ usoro (gụnyere ekwe, ịbịaru na-akpụ). Usoro nkewa bụ iji kewaa akụkụ stampụ na oghere n'akụkụ akara akara ụfọdụ na usoro stampụ ahụ, na ogo nke ngalaba nkewapụrụ iche nke akụkụ stamping ga-emerịrị ụfọdụ ihe achọrọ; na-akpụ usoro bụ ime ka zọ oghere oghere plastic nrụrụ n'okpuru ọnọdụ nke ọ bụla mmebi, ma gbanwee ya n'ime chọrọ okokụre ngwaahịa udi, na-izute chọrọ nke akụkụ ndidi na akụkụ ndị ọzọ.
* Dị ka ọnọdụ ọnọdụ okpomọkụ dị, e nwere ụzọ abụọ nke stampụ oyi na stampụ dị ọkụ. Nke a dabere na ike, plasticity, ọkpụrụkpụ, deformation ogo na akụrụngwa ikike nke ihe, na mbụ okpomọkụ ọgwụgwọ ala na ikpeazụ ọrụ ọnọdụ nke ihe onwunwe kwesịrị-atụle. 1. Nzuzo zọ metal nhazi na ụlọ okpomọkụ, n'ozuzu na ọdabara na ọkpụrụkpụ nke na-erughị 4mm oghere. Ọ nwere uru nke enweghị kpo oku, enweghị akpụkpọ oxide, mma dị elu, ọrụ dị mma na ọnụ ala. Ihe ọghọm bụ na enwere ọrụ na-eme ka ọrụ sie ike, nke na-eme ka ọla ahụ tufuo ike nrụrụ ọzọ. Okpukpo nke oghere bụ otu ihe ma ọ dịghị mkpa achọrọ. 2. Ihe na-eme ka a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na igwe okpomọkụ. Ihe ndị bara uru bụ na ọ nwere ike iwepụ nrụgide dị n'ime, zere ime ka ọrụ sie ike, mee ka plasticity dịkwuo elu, belata nkwụsị nrụrụ ma belata ike oriri nke akụrụngwa
* Zọ ngwaahịa
Metal zọ echebe ntupu
Galvanized mpempe akwụkwọ Herọd
Aluminom zọ tray
Nkenke zọ metal efere
* Ihe atọ dị mkpa nke sistemụ mmepụta usoro: ịnwụ, pịa na mpempe akwụkwọ
1. Punching Die Die bụ ihe dị mkpa na-anwụ na zọ ngwaahịa. E nwere ụdị ụdị stampụ atọ: ọnwu dị mfe, ịnwụ na-aga n'ihu na ịnwụ anwụ.
Die Die bụ ihe dị mkpa ịnwụ na imepụta stampụ. E nwere ụdị ụdị stampụ atọ: ọnwu dị mfe, ịnwụ na-aga n'ihu na ịnwụ anwụ.
(1) Nwụrụ anwụ: ọnwụ dị mfe bụ ọnwụ nke na - emecha otu usoro n'otu usoro mgbasa ozi. O adabara maka obere ogbe mmepụta nke akụkụ dị mfe.
(2) Na-aga n'ihu na-anwụ: na otu ọrịa nke ndị nta akụkọ, ọnwụ nke mezue ọtụtụ usoro stampụ n'akụkụ dị iche iche nke ịnwụ n'otu oge a na-akpọ anwụ na-aga n'ihu. Na-aga n'ihu na-adabara elu arụmọrụ akpaka mmepụta.
(3) Compound na-anwụ: na ọrịa strok, n'otu akụkụ nke ọnwụ iji mezue ọtụtụ usoro stampụ n'otu oge, nke a maara dị ka ihe mejupụtara. Onu agha adabara stampụ akụkụ na nnukwu mmepụta na oke nkenke.
Na-aga n'ihu anwụ
2. unchgba ọkpọ
Production zọ bụ tumadi n'ihi na efere. Site na ebu, nwere ike ime blanking, punching, akpụ, ịbịaru, emecha, mma blanking, shaping, riveting na extrusion akụkụ, wdg, ọtụtụ-eji dị iche iche ubi. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eji ngbanwe, ntọala, iko, kọbọd, efere, okwu kọmputa, ọbụnadị ụgbọelu ndị nwere mgbọ E nwere ọtụtụ akụrụngwa enwere ike iji ntụpọ mepụta site na ebu. Enwere ụdị igwe ọkpọ ọkpọ dị iche iche.
(1) Mechanical ike pịa Mechanical Punch nwere ofu ọrịa strok, kemeghi ọsọ na ala arụpụtaghị. Oke ọsọ 180 ugboro / min.
(2) Hydraulic pịa
Ngwunye hydraulic nwere ike idozi stampụ stampụ site na valve hydraulic iji melite arụpụtaghị ihe. Ọsọ ọsọ kachasị elu nwere ike iru 1000 oge / min. Ihe ọghọm bụ ike oriri dị elu, ihe dị elu chọrọ na gburugburu ebe obibi na ịrụ ọrụ dị ukwuu.
(3) Igwe onu ogugu enwere ike
Iji igwe eji eji eme ihe iji kpoo isi, arụpụtaghị ihe dị elu, ruo oge 800 / min. Obere ike oriri, mmezi dị mfe na obere nha. Ya mere, etinyego ya n'ọrụ.
Maka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nkịtị, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-eji ọkpọ igwe. Dika mmiri mmiri di iche iche eji eme ihe na hydraulic, enwere ndi oru hydraulic na hydraulic presses. Ihe ka ọtụtụ n’ime ha na-eji ígwè ọrụ hydraulic, ebe a na-ejikarị ígwè eletrik arụ ọrụ maka nnukwu ma ọ bụ igwe pụrụ iche. N'ihi uru ndị pụtara ìhè ọ na-ara, a na-eji igwe eji arụ ọrụ ọtụtụ ebe.
Nchịkọta Ọnụ ọgụgụ Turret Punch Press
Mechanical Power Pịa
3. Stamping ihe The zọ ihe nke akụkụ bụ n'ozuzu efere. Ihe ndị ahọpụtara maka imepụta ngwaahịa ga-ezute arụmọrụ ọrụ nke ngwaahịa a, dị ka isiike, ike na omume nke ngwaahịa a. N'aka nke ọzọ, ọ kwesịrị izute chọrọ nke plasticity, elu àgwà na ọkpụrụkpụ nke zọ usoro. Nhazi usoro nke akụkụ stamping kwesịrị ịtụle njirimara usoro stampụ, ịgbanye radius, oghere oghere, ndokwa, ịbịaru omimi, wdg. Efere ndị a na-ejikarị bụ obere carbon nchara, igwe anaghị agba nchara, aluminom, ọla kọpa na alloys ha, nke nwere nnukwu plasticity. na nkwarụ nrụrụ dị ala, ma ha kwesịrị ekwesị maka stampụ oyi. (1). Ferrous ọla: SPCC / SPCD / spce, SECC / SECD / sece, SGCC, sgld, Sus (2). Aluminom alloy: al1050p, al1100p, al5020 (3). Ngwongwo ọla kọpa: Pb phosphor bronze, HBS brass brass (4). Cupro nickel alloy.
* N'elu ọgwụgwọ technology nke zọọ akụkụ Mgbe metal na mbụ na-hazie na ekara, ọ kwesịrị gbanwee metal, mma elu, na n'ihu ịgbanwe n'ibu na nke anụ ahụ na chemical Njirimara nke metal n'elu. A na-akpọ usoro a ọla ọgwụgwọ ala. Ebumnuche nke ịgwọ igwe dị n'ime ụzọ anọ:
(1) Mara mma
(3) Pụrụ iche elu Njirimara
(4) Meziwanye ihe eji arụ ọrụ, dịka nkwụsị na-eyi, mmanu, wdg.
* Typedị ụdị ọgwụgwọ Electroplating (zinc, ọla kọpa, nickel, chromium, gold, ọlaọcha), electrostatic spraying, ịgba sere, electrophoresis, silk ihuenyo obibi akwụkwọ, anodizing, blackening, passivation
* Mpempe akwụkwọ metal stamping dị mfe iji nweta elu arụmọrụ mmepụta site mechanization na akpaaka mfe ịghọta mechanization na akpaaka na elu mmepụta arụmọrụ; akụkụ stamping nwere oke ziri ezi na ezigbo mgbanwe; elu ahụ na-adị larịị ma na-adị ire ụtọ, na-ejikarị ígwè ọrụ. A na-ejikarị ya eme ihe na ụgbọala, ngwa eletriki, akụrụngwa, ụgbọelu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụpụta ihe.
Mestech na-enye gị akụkụ metal zọ ngwaahịa na ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla ma ọ bụ mkpa ịmatakwu, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Olee otú ịhọrọ gị injection ebu emeputa
Osote: Nhazi ụlọ eletrọniki
Uzo plastic ịkpụzi
Plastic ntụtụ injection ịkpụzi
Elastomer TPS wheel injection ịkpụzi